Yan Aung: ဒါကဒီလိုရှိတယ်၊ ဟိုဟာကဟိုလိုရှိတယ်…
ကျွန်တော်လည်း နည်းနည်း အလုပ်ရှုပ်နေတာနဲ့ post အသစ်သိပ်မတင်ဖြစ်လိုက်ဘူး။ အားတဲ့အချိန်လေးမှာ ဆရာကံချွန်ရေးတဲ့ စာအုပ်လေးတစ်အုပ်ဖတ်နေမိတယ်. သဘောကျတာနဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ပရိသတ်ဖတ်လို့ရအောင် ပြန်တင်ပေးလိုက်တယ်ဗျာ…
အမှာစာကိုစဖတ်ပြီးကတည်းက စွဲသွားတာ. ဆက်ဖတ်ရင်းနဲ့ ကလေးတွေကို ဖွံ့ဖြိုးအောင် ဘယ်လိုပြုစုပျိုးထောင်ပေးရမလဲဆိုတဲ့ အပိုင်းလဲရောက်ရော ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်မိလိုက်တယ်. ဒီစာအုပ်ကို ကျွန်တော့်ရဲ့ Blog Reader တွေအတွက်ပြန်လည်မျှဝေပေးသင့်တယ်လို့လေ…
"ရည်မှန်းချက်က ကြီးကျယ်ရင် အချိန်ပေးရလိမ့်မယ်။ ကြီးကျယ်တဲ့ အလုပ်တိုင်းဟာ ရင်းနှီးရမယ့် အချိန်တန်ဖိုးကြီးမားပါတယ်။ ခဏကြိုးစားပြီး ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆို စိတ်ဓာတ်ကျလို့ မရဘူး။ တီဗွီကြော်ငြာထဲမှာသာ ကွေကာအုပ် တစ်ခွက်သောက်ပြရုံနဲ့ အရပ်ကြီးရှည်၊ လူက၀၊ ဥာဏ်တွေကောင်းဖြစ်နေတာပါ။ လက်တွေ့ဘ၀မှာ ထိုက်တန်တဲ့ ရင်းနှီးမှုမရှိဘဲ လှပတဲ့ဘ၀ မရနိုင်ပါဘူး။ ဘ၀ကြီး တိုးတက်ချမ်းသာဖို့ အမွှေးတိုင်အားကိုးလို့ မရပါဘူး..."
" မြန်မာလူ့အဖွဲ့အစည်းက အရှက်တရား၊ အကြောက်တရားအပေါ် အခြေခံပြီး ဖွဲ့စည်းထားတာပါ။ အသိဥာဏ်အတွေးအခေါ်မြင့်သူများကတော့ ရှက်သင့်တာနဲ့ မရှက်သင့်တာ ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ အသိဥာဏ်အတွေးအခေါ် နုသူများနဲ့ နိမ့်သူများကတော့ မခွဲခြားနိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း မရှက်သင့်တာမှာရှက်ပြီး မပြောမဆိုအသိမပေးမိလို့ ကိုယ့်သားသမီး မဖုံးနိုင်မဖိနိုင် လွန်ကျွံပြီးကာမှ သိရတဲ့ မိဘတွေ၊ ဒူးနဲ့ မျက်ရည်သုတ်ရတဲ့ သမီးမိန်းကလေးတွေ ဆိုတာ ရှိလာရတာပေါ့။ ကျွန်တော်တို့လူမျိုးရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဓလေ့စရိုက်ကို အဆင့်မြင့်မြင့် သိက္ခာရှိရှိဖြစ်အောင် ထိန်းသိမ်းတတ်ဖို့၊ အသုံးချတတ်ဖို့တော့ လိုပါတယ်..."
တက်ကျမ်းရေးတဲ့ စာရေးဆရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်. ဒါပေမယ့် ဆရာကံချွန်ချဉ်းကပ်ထားပုံလေးက တစ်မျိုးထူးခြားနေပါတယ်. ဖတ်ကြည့်လိုက်ကြပါဦးဗျာ…
ဒီစာအုပ်ကနေ စာဖတ်သူအတွက် ခွန်အားတစ်ရပ်မွေးဖွားပေးနိုင်ခဲ့ရင် ကျွန်တော်အပင်ပန်းခံရကျိုးနပ်ပါပြီ…
ကျွန်တော့်ရဲ့ အစ်မတစ်ယောက်လို ရင်းနှီးခင်မင်ရတဲ့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ဆီကိုတောင် ဒီစာအုပ်လေးကို လက်ဆောင်ပို့ပေးလိုက်သေးတယ်ဗျ…
အဲဒီ့စာအုပ်လေးကိုဖတ်ပြီး ခွန်အားသစ်တွေ၊ အတွေးအခေါ်သစ်တွေ ရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ အစ်မရေ…